Posted by ကိုလူဩ at 8:17 AM No comments:
Posted by ကိုလူဩ at 8:04 AM No comments:
Posted by ကိုလူဩ at 4:17 PM 1 comment:
ဦးအေးမောင်၊ဗုဒ္ဓနဲ. ဗုဒ္ဓဝါဒ၊အခန်း(၃) ၊ ဗုဒ္ဓမပေါ်မီက အိန္ဒိယ အယူဝါဒများ
ဒီအခန်းကစပြီး ကျွန်တော် အချီးနိဒါန်းသဘောမျိုးရေးပါတော.မယ်။ ကျွန်တော် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ. အပိုင်းလေးတွေကို ကျွန်တော်. အမြင်သက်သက်နဲ. ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ. ပက်သက်လို. ဘုရားဟောတဲ. အချက်တွေကို ကျွန်တော်တို. ငယ်စဉ်က နာကြားခဲ.ရလို.ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးလို.ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တော်တော်များများက တရားနဲ.မစိမ်းကြပါဘူး။
အခုဒီအခန်းလေးမှာတော. ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ. တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ. အကြောင်းအရာတွေမပါပေမဲ. ဗုဒ္ဓခေတ်ကလူတွေရဲ. ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ စိတ်နေစရိုက်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ စတာတွေကို စာရေးဆရာက တတ်နိုင်သမျှ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအထဲက အကြောင်းအရာတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ ဗုဒ္ဓခေတ်က အိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်ဝါဒသည် ဒီလောက်ကြီးအရှိန်အဝါမကြီးသေးတဲ. အကြောင်း ၊ ဘာသာရေးလွပ်လပ်ခွင်.လည်း အလွန်မြင်.မား၍ မည်သည်.ဘုရင်ကမျှဘာသာရေးကို ချုပ်ချယ်လေ.မရှိကြကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓနှင်. ခေတ်ပြိုင် ဘာသာရေးဆရာကြီးများရဲ. အယူအဆများနှင်. တွေးခေါ်ပုံများ၊ တောထွက်၍တရားအားထုတ်ခြင်းသည် ထိုခေတ်လူတို. ၏ဓလေ.ထုံးစံ ဖြစ်တဲ. အကြောင်း၊ စသဖြင်. ဖော်ပြထားပါတယ်။
"မဇ္ဈိမဒေသ၌ ဗြဟ္မဏတို. တန်ခိုးမကြီးသေးဘဲ
လူတို.သည် လွပ်လပ်စွာ ကြံစည်စဉ်းစား၍
ဂေါတမဗုဒ္ဓ ပွင်.တော်မူသော ဘီစီ ၆ ရာစုခေတ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းတွင် လိမ္မာယဉ်ကျေး အဆင်.အတန်းမြင်.သော အာရိယန်လူမျိုးတို.နေထိုင်ကြ၏။ ပိဋကတ်စာပေနှင်. ဝေဒကျမ်းများ၌ ခတ္တိယ၊ ဗြာဟ္မဏ၊ ဝေဿနှင်. သုဒ္ဒ ဟူ၍ ရှေးအိန္ဒိယပြည်ရှိ ဇာတ်အမျိုးလေးပါးကို ဖော်ပြထား၏။ ခတ္တိယတို.မှာ လယ်မြေကို အစိုးရသော မင်းမှူးမတ်စစ်သူကြီးမျိုး၊ လယ်ပိုင်ရှင်သူဌေးမျိုးဖြစ်၍ ရှေးအာရိယန်ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲများမှ သက်ဆင်းလာကြသည်ဆို၏။ ဗြဟ္မဏတို.ကား ရှေးအာရိယန်တို.၏ ဆရာဘုန်းကြီးများနှင်. ဆက်နွယ်ကြသည်ဆို၏။ ဝေဿတို.မှာ ကုန်သည်၊ သူကြွယ်လယ်သမားမျိုးဖြစ်၍ သုဒ္ဓတို.မှာ အာရိယန်တို. အိန္ဒိယပြည်သို. မရောက်လာမီက ရှိနှင်.ပြီးဖြစ်သော ဒြာဗီးဒီးယန်းလူမျိုး အဆက်အနွယ်များဖြစ်၏။
ဗြာဟ္မဏတို.သည် ဇာတ်ဝါဒကို ထောက်ခံအားပေးကြ၏။ ဘီစီ ၆ ရာစုခေတ်က အိန္ဒိယပြည် မြောက်ပိုင်း၌ သူတို. တန်ခိုးဩဇာ မပျံ.နှံ.သေးသဖြင်. ဇာတ်ဝါဒသည်လည်း ထုထည်အင်အား မကြီးမားသေားချေ။ ရှေးဗြဟ္မဏကျမ်းတို.၏ အဆိုအားဖြင်. ဇာတ်ဝါဒကျင်.သုံးသော တိုင်းပြည်များမှာ ကုရုတိုင်း နှင်. ပဉ္စာလတိုင်းများ ဖြစ်၏။ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းအလယ်ပိုင်းရှိ မဂဓ, ကောသလ စသော တိုင်းပြည်များ၌ ဇာတ်ဝါဒ မထွန်းကားသေးချေ။ ဗုဒ္ဓစာပေ၌ မဇ္ဈိမဒေသရှိ အချို.လူတို.၏ ဇာတ်ဝါဒ အယူသီးမှုကို ပြသော သာဓကများ ရှိသည်မှန်၏။ ဝိဋဋူပနှင်. သာကီဝင်တို. စစ်ဖြစ်ကြခြင်းသည် ဇာတ်အယူသီးမှုကြောင်.ဖြစ်၏။ သို.ရာတွင် ဇာတ်ဝါဒ စည်းမျဉ်းများမှာ အခါခပ်သိမ်း မတင်းကျပ်လှချေ။ ဥပမာ ဇာတ်ကြီးသောသူသည် မိမိရိုးရာ အလုပ်မှတစ်ပါး အခြားအလုပ်များကို ရှောင်ကြင်ရမည်ဖြစ်၏။ သို.စဉ်လျက် ကုသမင်းသည် ပပဝတီမင်းသမီးကို လိုချင်သောကြောင်. အိုးထိန်းသည်၊ စားတော်ချက်စသော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်သည်ဆို၏။ အခြားဇာတ်များ၌ ကုန်သွယ်မှု၊ အမဲလိုက်မှု စသည်ဖြင်. အသက်မွေးသော ဗြာဟ္မဏများ အကြောင်းဖော်ပြထား၏။
မဇ္ဈိမဒေသ၌ ဗြာဟ္မဏတို.ကို ဆန်.ကျင်သောသူများမှာ ခတ္တိယတို.ဖြစ်၏။ ခတ္တိယတို.သည် ဇာတိမာန်ရှိ၍ ဗြာဟ္မဏတို.ကို ဇာတ်မြင်.သောသူများအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြချေ။ သာကီဝင်တို.သည် ဗြာဟ္မဏဆရာကြီးတစ်ဦး၏ တပည်.အား မိမိတို. စည်းဝေးရာဌာန၌ နေရာထိုင်ခင်းမပေးဘဲ မထေမဲ.မြင် ပြက်ရယ်ပြုကြ၏။ သို.ရာတွင် ဗြာဟ္မဏနှင်. ခတ္တိယ တို.သည် အမြဲထာဝရ ရန်သူများမဟုတ်ကြချေ။ အချို.ဗြာဟ္မဏတို.သည် ခတ္တိယနွယ်ဝင် ဘုရင်တို.အား အချို.ကိစ္စများ၌ အကြံဥာဏ်ပေး၍ မြှောက်စားခြင်း ခံကြရ၏။ ဗုဒ္ဓသံဃာ၌ ဗြဟ္မဏတော်တော် များများ ပါဝင်၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မဟာကဿပ စသော ဗုဒ္ဓ၏ သာဝကကြီးများသည် ဗြဟ္မဏများဖြစ်ကြ၏။
စင်စစ် ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ဗြာဟ္မဏဝါဒကို နောက်ခံထား၍ ပေါ်ထွန်းလာသောဝါဒဖြစ်ရကား ဗြာဟ္မဏတို.၏ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆများကို လေ.လာရန်လိုအပ်၏။
ရှေးအာရိယန်တို.သည် နေ၊လေ၊ မိုး၊ မီး စသော သဘာဝခြင်းရာ ကမ္ဘာ.တန်ဆာများကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ သူတို.၏ နတ်ဘုရားများကို ဒေဝဟုခေါ်၍ သူတို.အယူဝါဒနှင်. ဓလေ.ထုံးစံများကို ရှေးဝေဒကျမ်းများ၌ ဖော်ပြထား၏။ ဝေဒကျမ်းများတွင် ဣသျှူဝေဒသည် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်၏။ ထိုဝေဒ၌ နတ်ဘုရားများကို ချီးကျုး ထားသော ကဗျာများနှင်. အာရိယန်လူမျိုးတို.၏ အတိတ်ဖြစ်စဉ်ကို ဖွဲ.နွဲ.စပ်ဆိုထားသော ကဗျာများပါရှိ၏။ ဒုတိယဝေဒဖြစ်သော သာမဝေဒ၌ သူတို.နှစ်သက်သော သေရည်၏ အရှင်သောမနတ်ဘုရားနှင်. သက်ဆိုင်သည်.ကဗျာများကို ဖော်ပြထား၏။ တတိယ ယဇုဒေဝ၌မူ နတ်ဘုရားများကို ရည်စူး၍ ပြုလုပ်ရသော ယဇ်ပူဇော်ပွဲများတွင် ရွတ်ဆိုလျှောက်ထားရသော ကဗျာများ ပါရှိ၏။
အထက်ပါ ဝေဒသုံးပုံအပြင် အာတပ္ပနဝေဒဟုခေါ်သော ဝေဒတစ်ခု ရှိသေး၏။ နောက်ဆုံးပေါ်ဝေဒဖြစ်၍ လောကီပညာဆိုင်ရာ ဂါထာမန္တရားအမျိုးမျိုးကို ပြဆိုထားသော ဝေဒဖြစ်၏။ ဒီဃနိကာယ် ဗြဟ္မဇာလသုတ်၌ ဖုတ်တစ္ဆေအတတ်၊ အင်္ဂဝိဇ္ဖာ အတတ်၊ နေကို လုပ်ကျွေးခြင်း အတတ်စသည်ဖြင်. အချို.သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တို.၏မှား ယွင်းသောအသက်မွေးမှုများကို ရှည်လျားစွာဖော်ပြထား၍ ယင်းတို.မှာ အာတပ္ပနဝေဒကျမ်းလာ လောကီပညာများ ဖြစ်ဟန်ရှိ၏။
ဝေဒခေတ် အိန္ဒိယလူမျိုးတို.၏ ဘာသာတရားမှာ မျက်မှောက်ဘဝ ကောင်းစားရေးကို ပဓနထားသော တရားဖြစ်၏။ တမလွန်ဘဝအကြောင်းကို သူတို. အလေးအနက် မစဉ်းစား ကြချေ။ သေပြီးနောက်ကာလ၌ လူကောင်းသည် ထာဝစဉ် ချမ်းသာစွာနေရ၍ မကောင်းသောသူမှာ အမြဲ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံနေရသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။
လူသည် ဘဝပေါင်းများစွာ ကျင်လည်ရသည်ဟု မယူဆကြချေ။ ဘဝသံသရာနှင်. ကမ္မဝါဒသည် ဝေဒခေတ်အလွန်မှ ပေါ်ပေါက်လာသော အယူများဖြစ်၏။
ထိုခေတ်လူတို.သည် ယဇ်ပူဇော်ပွဲ၏ အကျိုးအာနိသင်ကို အထူးယုံကြည်ကြ၏။ ယဇ်ပူဇော်ပွဲတစ်မျိးအကြောင်းကို ဒီဃနိကာယ် ကူဋဒန္တသုတ်၌ ဖော်ပြထား၏။ ယဇ်ပူဇော်ပွဲ ပြုလုပ်ရာ၌ အစစအရာရာ ထုံးနည်းမှန်ကန်တိကျရန်လိုအပ်သောကြောင်. ဗြာဟ္မဏတို.က ကြီးကြပ်စီမံရ၏။ ဗြာဟ္မဏအားလုံးမှာ ယဇ်ပူဇော်ပွဲဖြင်. စီးပွားရှာသူများ မဟုတ်ကျချေ။ ဥာဏ်အမြင်ရင်.ကျက်သော ဗြာဟ္မဏတို.သည် ယဇ်ပူဇော်မှုနှင်. ဝေဒကျမ်းများကို သံသယရှိ၍ အမှန်တရားကို ရှာကြံစဉ်းစားလာကြ၏။ ထိုသူတို.၏ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်များကို ဥပနိသျှမည်သော ကျမ်းများ၌ ဖော်ပြထား၏။
ဥပနိသျှကျမ်းများ၏ အဆိုအားဖြင်. သတ္တလောကကြီး တစ်ခုလုံး၏ မူလပင်မမှာ ပရအတ္တ ဖြစ်၏။ (အနောက်နိုင်ငံ ပညာရှင်တို.၏ စာအုပ်များမှ Atman ကိုပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်) စကြာဝဠာ၌ ရှိရှိသမျှသော နတ်လူသတ္တဝါ အားလုံးသည် ပရအတ္တ၌ မူလအစရှိ၍ ပရအတ္တနှင်. နောက်ဆုံး ပြန်လည် ပေါင်းစည်းကြရမည် ဖြစ်သည်။ ပရအတ္တသည် အကောင်းဆုံး၊ အမြတ်ဆုံး နိစ္စဓူဝ အသင်္ခတဓာတ်ဖြစ်၍ ယင်း၏ ဝိသေသဂုဏ်များကို လူတို.ဥာဏ်ဖြင်. ကြံစည်သော်လည်း ဘာမျှသိရမည်မဟုတ်။ ယင်းသည် အစိန္တေယျဖြစ်၍ ဥပနိသျှဆရာတို.က ဤသို.မဟုတ်၊ ထိုသို.မဟုတ် ဟူ၍သာ ငြင်းဆိုကြ၏။
လောက၌ ပရအတ္တမှတစ်ပါး အခြားဘာမျှမရှိ။ မြင်မြင်သမျှ သက်ရှိသက်မဲ. တို.သည် မာယာမျှသာဖြစ်၏။ (ဝါ) လူတို.အမြင်မှား၍ ဧကန်ထင်ရှားရှိသည်ဟု ထင်မှားနေကြခြင်းဖြစ်၏။ ပရအတ္တနှင်. ကင်းကွာနေသောကြောင်. သတ္တဝါတို.သည် မိမိတို.ပြုသော ကံကစီမံပြဌာန်းသည်. အတိုင်း ဘဝသံသရာ၌ကျင်လည်၍ ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြရ၏။ ဘဝသံသရာမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဝေဒများကို သင်အံရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်၏။ အရေးကြီးသည်ကား ဘဝသံသရာ၌ နှောင်ဖွဲ.ထားသော တဏှာကို ပယ်ဖြတ်၍ ပရအတ္တနှင်. ပြန်လည်ပူးပေါင်းမိရန်ဖြစ်၏။ ပရအတ္တကို ဝိပဿနာဥာဏ်ဖြင်. သိမြင်မှသာ မိမိ၏ မူလပင်မဓာတ်နှင်. ပြန်လည်ပေါင်းစည်း၍ ထာဝရငြိမ်းအေးမှု၊ (ဝါ) သုခအစစ်အမှန်ကို ရရှိမည်ဖြစ်၏။
အထက်ပါအချက်များမှာ ဥပနိသျှကျမ်းလာ ဗြာဟ္မဏဝါဒ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်၏။ အချို.နေရာများ၌ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင်. ဆင်ဆင်တူသောကြောင်. အချို.ပညာရှင်တို.က ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ဗြာဟ္မဏဝါဒ၏ အစွယ်အပွားဖြစ်မည်ဟု ယူဆကြ၏။ သို.ရာတွင် အပေါ်ယံတူညီမှုများကို လည်း သတိပြုသင်.ပေ၏။ ဗြာဟ္မဏဝါဒသည် ဗုဒ္ဓဝါဒထက် ရှေးကျ၍ ကမ္မဝါဒ၊ ဘဝသံသရာ၊ အနိစ္စတရား စသည်တို.မှာ ဗုဒ္ဓဝါဒမပေါ်မီက ရျှိနှင်.ပြီးသော တရားများဖြစ်သည်မှန်၏။ သို.ဖြစ်စေကာမူ ဒေါက်တာရိုင်း(စ) ဒေးဗစ်၊ ပရော်ဖက်ဆာ ဘန္ဒကာ( Dr. Bhandarkar) စသော ရှေးအိန္ဒိယ ဘာသာရေးသုတေသီဆရာတို.၏ လေ.လာချက်အရ ထိုတရားများကို ဗြာဟ္မဏ ဆရာတို.က ရှေးဦးပထမ ဟောပြောခဲ.သည်ဟု အခိုင်အမာ မဆိုနိုင်ချေ။
အိန္ဒိယပညာရှင် ဘန္ဒကာသည် ရှေးအိန္ဒိယ ကျောက်စာများကို ကိုးကား၍ ဗုဒ္ဓလက်ထက်မတိုင်မီက ဗြဟ္မဏတို.မှာ ထင်ရှားသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမဟုတ်ပါဟု ရေးသားခဲ.၏။ ထိုကျောက်စာများ၌ ခရစ်တော်ပေါ်ပြီး ဒုတိယရာစုခေတ်မှစ၍ လူတို.က ဗြာဟ္မဏတို.အား ကျေးရွာနှင်. မြေယာလှူဒါန်းသော သာဓကများ ဖော်ပြထား၏။
ခရစ်မပေါ်မှီ သုံးရာစုမှ ပေါ်ပြီး တစ်ရာစုအထိ ကာလအတွင်း၌မူ ဗြာဟ္မဏတို.ကို ကျောက်စာများက အလျှင်းမဖော်ပြချေ။ မင်း၊ သူဌေးသူကြွယ်တို.၏ အလှူဒါနများကို ဖော်ပြသော ကျောက်စာများရှိသော်လည်း ဗြဟ္မဏတို.ကို ပေးလှူကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ အထောက်အထားမတွေ.ရချေ။ သို.ဖြစ်၍ ထိုအခါက ဗြာဟ္မဏတို. မှာ လူအများ၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းခံရသော ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။
ဗုဒ္ဓ မပွင်.မီက မဇ္ဈိမဒေသ၌ ရှိပြီးသော တရားများသည် ခတ္တိယဒဿနိက ဆရာတို.မှတစ်ဆင်. ပြန်.ပွားနေသော တရားများ ဖြစ်တန်ရာ၏။ ဗြဟ္မဏတို.မှာ ဗုဒ္ဓဝါဒီ၊ ဂျိန်းဝါဒီတို.ကဲ.သို. တက်ကြွစွာ ဟောပြောစည်းရုံးမှုများလည်း မရှိကြချေ။ ထိုခေတ်က အိန္ဒိယပြည်သည် ဘာသာရေးလွပ်လပ်မှု မြင်.မားသော တိုင်းပြည်ဖြစ်၏။ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုကို မည်သည်.ဘုရင်ကမျှ ချုပ်ချယ်ခြင်း မပြုချေ။ အသိဥာဏ်နှင်. ဆင်ခြင်စဉ်းစား ဥာဏ်ရှိသော သူတို.သည် လွပ်လပ်စွာ ကြံစည်တွေးတော၍ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်များ လှုပ်ရှား ပြောင်းလဲလျက်ရှိလေသည်။
တောထွက်၍ တရားအားထုတ်ခြင်းသည် ထိုခေတ် လူတို.၏ ရှေးဓလေ.ထုံးစံဖြစ်၏။ အသက်အရွယ်၊ ဇာတ်အမျိုးအနွယ်နှင်. မသက်ဆိုင်ဘဲ လူတိုင်းအဖို. မွန်မြတ်သော အလုပ်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူထား၍ ကျင်.စဉ်မှာ အမျိုးမျိုးအစားစားရှိ၏။ အချို.က ဝေဒများကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်၍ အချို.က မိမိတို. ယုံကြည်မြတ်နိုးရာ (ဥပမာ - မီး) ကို လုပ်ကျွေးပူဇော်ကြ၏။ အထူးထင်ရှားသော ကျင်.စဉ်မှာ မိမိကိုယ်ကို ဥှာဉ်းဆဲ နှိပ်စက်မှုဖြစ်၏။ ယင်းကို ရည်ညွန်းသော စကား ‘တပ’ ကို ဣသျှူဝေဒကျမ်း နောက်ပိုင်း၌ တွေ.ရ၍ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တန်ခိုးဣဒ္ဓိရရှိရန်ဖြစ်၏။ ဒီဃနိကာယ် ကဿပသီဟနာဒ သုတ်၌ မြက်, နွားချေး, မစင်ကို စားခြင်း ၊ ရေမသောက်ဘဲနေခြင်း ၊ ဆူးအခင်းပျဉ်ပြား မြေကြီးပေါ်၌ အိပ်ခြင်း၊ အမြဲရပ်နေခြင်း စသော ကျင်.စဉ်များကို ဖော်ပြ၍ မဇ္ဈိမနိကာယ် ကုက္ကုရဝတိကသုတ် ၌ တက္ကတွန်းတို.၏ ခွေးအကျင်.၊ နွားအကျင်.များအကြောင်း ပြဆိုထား၏။
မိမိကိုယ်မိမိ ဥှာဉ်းဆဲမှုမပြုဘဲ အမှန်တရား ရှာဖွေသောသူကား ပရဗိုဇ်ဖြစ်၏။ ပရဗိုဇ်တို.သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို. လှည်.လည်သွားလာ၍ တရားဆွေးနွေးကြ၏။ စကားစစ်ထိုး၍ အနိုင်ရခြင်း၌ ဂုဏ်ယူကြ၏။ “ငါသည် စိတ်မရှိသော သစ်ပင်ကို သော်လည်းကောင်း စကားအစဉ်ဖြင်. ဝါဒတင်ဆိုငြားအံ.၊ ထိုသစ်ပင်သည် ပြင်းစွာ တုန်လှုပ်ရာ၏” စသည်ဖြင်. သစ္စကပရဗိုဇ်က ကြုံးဝါး၏။ ရဟန္တာသည် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုပြီးသည်.နောက်၌ ရှိသလော မရှိသလော၊ ရှိလည်းရှိ၊ မရှိလည်းမရှိဖြစ်သလော။ ရှိသည်မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်းမဟုတ် ဖြစ်သလော စသော မေးခွန်းများကို ထောက်ချင်.၍ ပရဗိုဇ်တို.သည် မည်မျှ စစ်စစ်ဖုဖု မေးမြန်းတတ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။
ပိဋကတ်စာပေ၌ အာဇီဝက၊ ဇဋိလ၊ ဒေဝဓမ္မိက၊ ဂေါတမက စသော ရသေ. သို.မဟုတ် ပရဗိုဇ်အဖွဲ.အမည်များကို တွေ.၇၏။ အာဇီဝကတို.သည် အသောကမင်း၏မြေး ဒသရဌမင်း၏ လက်ထက်အထိရှိ၍ ထိုမင်းက သူတို.နေထိုင်ရန် လိုဏ်ဂူများပြုလုပ်ပေးကြောင်း ကျောက်စာများမှ သိရ၏။ဂေါတမကတို.မှာ ဒေဝဒတ်၏ ဂိုဏ်းသားများဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာရိုင်း(စ) ဒေးဗစ် က ယူဆ၏။ တရုတ်ခရီးသည် ဖာဟီယန်၏ အေဒီငါးရာစု အိန္ဒိယပြည်မှတ်တမ်း၌ ဒေဝဒတ်ဂိုဏ်းသားများကို ကောသလတိုင်း၌ တွေ.ခဲ.ကြောင်း၊ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓကို သူတို.အသိအမှတ် မပြုကြောင်း ဖော်ပြထား၏။
ပရဗိုဇ်တို.ကဲ.သို. လူသိများသော အခြားဘာသာရေး ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ပုရာဏကဿပ၊ မက္ခလိဂေါသာလစသော တိတ္တိဆရာများ ဖြစ်၏။ ပုရာဏကဿပက ကောင်းမှုမကောင်းမှုဟူ၍ မရှိ၊ သီလဆောက်တည်ခြင်း အလှူပေးခြင်းသည် အကျိုးမရှိဟုဟော၏။ မက္ခလိဂေါသာလကမူ တမလွန်ဘဝရှိသည်မှန်သော်လည်း လူတို.မှာ အကြောင်းမဲ. ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်နေကြသည်ဟု ယူဆ၏။ အဇိတကေသကမ္ဗလ၏ အမြင်အားဖြင်.ကား လူသည် ရုပ်တရားသက်သက်ဖြစ်၍ သေလျှင် ဘဝပြတ်၏။ သဉ္စယဗေလဌပုတ္တကမူ တမလွန်ဘဝ၊ ကမ္မဝိပါက စသော ဘာသာရေးပြဿနာများနှင်. ပတ်သက်၍ ဘာမျှမပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။
အထက်ပါ ဝါဒများထက် ပိုမိုထင်ရှားသော ဝါဒမှာ ဂျိန်းဘာသာဝါဒဖြစ်၏။ ဂျိန်းဘာသာကို တည်ထောင်သော မဟာဝီရမှာ ပိဋကတ်စာပေ၌ နိဂဏ္ဌနာဋပုတ္တအမည်ဖြင်. ထင်ရှား၏။ မဟာဝီရ၏ အဆိုအားဖြင်. လူသတ္တဝါတို. သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ ခံနေကြရခြင်းသည် နာမ်ဝိဥာဏ်နှင်. ရုပ်တရားပေါင်းစပ်နေမှုကြောင်. ဖြစ်၏။ ရုပ်တရား၏ နှောင်အဖွဲ.မှ ကင်းလွတ်ရန် ကမ္မအသစ်မဖြစ်ဘဲ ကမ္မအဟောင်းကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဥာဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြင်. ဘဝဟောင်းမှ ကမ္မသတ္တိအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်ဟု ဂျိန်းဝါဒီတို. ယုံကြည်ကြ၏။ သူတို. ပြင်းထန်စွာ ကျင်.ပုံကို မဇ္ဈိမနိကာယ်ဒေဝဒဟသုတ်၌ ဖော်ပြထား၏။
ဘီစီလေးရာစုအတွင်းက ချန္ဒရာဂွတ်ပတား (စန္ဒဂုတ်) မင်းသည် ဂျိန်းရဟန်းအဖြစ်ကို ခံယူသည်။ သားတော်ဗိန္ဒုသာရမင်းသည် ဂျိန်းရဟန်းများကို နေ.စဉ်ဆွမ်းလုပ်ကျွေးသည်ဆို၏။ ဘီစီတစ်ရာစုလောက်၌ ဂျိန်းဘာသာသည် အိန္ဒိယပြည် အရှေ.ပိုင်းဩရိဿနယ်မှ အနောက်မြောက်ပိုင်း မဓုရနယ်အထိ ပြန်.ပွားနေပြီဖြစ်၏။
ဂျိန်းဝါဒနှင်.ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ရှေ.ဆင်.နောက်ဆင်. ပေါ်ထွန်းလာသော ဝါဒများဖြစ်ရကား အချင်းချင်းအဆက်အသွယ် ရှိကောင်းရှိခဲ.ပေမည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒီတို.သည် အစပထမ၌ ဂျိန်းတို.ကို အတုယူ၍ နောက်ကာလ၌ ဂျိန်းတို.၏ ကျင်.စဉ်ထဲသို. ဗုဒ္ဓအငွေ.အသက် ဝင်လာဟန်ရှိသည်ဟု အချို.ပညာရှင်တို.ယူဆကြ၏။
ဘီစီခြောက်ရာစုခေတ်က အိန္ဒိယပြည် မဇ္ဈိမဒေသရှိ ဗြာဟ္မဏဝါဒမှာ ဂျိန်းဘာသာဝါဒလောက် အရှိန်အဝါမရှိသေးချေ။ စင်စစ် ပိဋကတ်စာပေ၌လာသော ဗြာဟ္မဏဝါဒသည် ဥပနိသျှကျမ်းလာ အယူအဆများကို မရည်ညွန်းဘဲ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ မီးကို လုပ်ကျွေးခြင်း၊ ဂင်္ဂါမြစ်၌ ရေချိုးခြင်းစသည်တို.ဖြင်.ပြီးသော ရှေးဟောင်းဗြာဟ္မဏဝါဒဖြစ်၏။ ဗြာဟ္မဏဆရာတို.သည် ဗုဒ္ဓဝါဒီ ရဟန်းတို.ကို ‘ဦးပြည်းခေါင်းတုံးရဟန်း’ ဟုခေါ်၍ “မည်းညစ်သောအကျင်.ရှိသည်။ ဗြဟ္မာမင်း၏ ခြေဖမိုးမှပေါက်ပွားလာသည်” စသည်ဖြင်.ကဲ.ရဲ.ရှုတ်ချကြ၏။ ဗုဒ္ဓ၏အဆိုအားဖြင်.မူ ဗြာဟ္မဏတိုသည် ရှေးအခါက သီလသမာဓိရှိ၍ နောက်ကာလ၌ အကျင်.ပျက်လာကြ၏။ “ရှေးအခါက ဗြာဟ္မဏတို.သည် မိမိတို.အမျိုး၌သာလျှင် ဥတုလာသော အခါ၌သာလျှင်ပေါင်းဖော်ကြ၏။ မိန်းမကို ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုဘဲ အကယ်မြတ်နိုးမှသာလျှင် ပေါင်းဖော်ကြ၏။ ဥစ္စာစပါး ရွှေငွေကို သိုမှီးသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိ။ တစ်နေ.၊ တစ်ရက်အတွက်သာ ဝမ်းစာရှာကြ၏။ ယခုခေတ် ဗြာဟ္မဏတို.သည်ကား ထိုသို.မကျင်.ကုန်” (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ ပဉ္စကနိပါတ်)
ထိုသို. မဇ္ဈိမဒေသ၌ ဗြာဟ္မဏတို. တန်ခိုးမကြီးသေးဘဲ လူတို.သည် လွပ်လပ်စွာ ကြံစည်စဉ်းစား၍ အယူဝါဒအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ကာ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်များ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေစဉ် ဂေါတမဗုဒ္ဓ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။​ ။
Posted by ကိုလူဩ at 7:04 AM No comments:
Posted by ကိုလူဩ at 6:27 AM3comments: